Ciidamada dawlada ee ku sugan galgaduud ayaa sheegaya in ay dileen sargaa ka tirsanaa al-shabaab – STAR FM SOMALIA
Saraakiisha ciidamada Dowladda Federalka Somaliya ee Gobolka Galgaduud, ayaa sheegay inay dileen Madaxii Zakawaadka u qaabilsanaa Al Shabaab Gobolka Galgaduud, kadib markii ay wada dagaalameen ciidamada Dowladda iyo kuwa Shabaabka.
Guddoomiyaha Degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud Cabdi Xasan Biyo Quute, ayaa sheegay dagaalka oo ka dhacay Deegaanka Ceel-Qooxle ay ku dileen labo nin oo ka tirsan Ururka Shabaab oo mid ka mid ah uu yahay Madaxii Zakawaadka ee Shabaab u qaabilsanaa Gobolka Galgaduud.
Cabdi Xasan Biyo Quute, ayaa ku sheegay magaca Sarkaalka Shabaab ka tirsan ee ciidamada Dowladda ay dileen in la odhan jiray Maxamed Ina Daabyaanbo, kaasi oo madax ka ahaa aruurinta Zakawaadka Shabaabka ay ka qaadaan dadka jooga Gobolka Galgaduud.
Sarkaalkaan ayaa la sheegay in lagu Khaarijiyay dagaalkaasi oo ciidamada Dowladda ay dileen, inkastoo aysan jirin warar madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada Saraakiisha Dowladda ee Gobolka Galgaduud oo ku aadan inay dileen Sarkaalkaasi.
Dagaalka la sheegay in Sarkaalkan lagu dilay, ayaa shalay wuxuu ka dhacay Deegaanka Ceel-Qooxle oo ka mid ah Deeganada hoostagga Degmada Ceelbuur ee Gobolkaasi.
Shabaab ayaa weeraro qorsheysan waxa ay ku qaadaan deegaano iyo Degmooyin ka tirsan Gobolka Galgaduud oo ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ay ku sugan yihiin.